Ngalaba: Ibi ndụ ahụike 2022 Ka
Ibi ndụ ahụike 2022, Ka
5 Mmega ahụ dị mfe nke nwere ike ịgbanwe ọdịdị ahụ gị ngwa ngwa (2022)
Okwu maka Ime nhọrọ nri Veggie bụ ihe a na-achọsi ike n'ezie (2022)
Mgbanwe site n'ịbụ anụ anụ / omnivore gaa na onye anaghị eri anụ - ma ọ bụ onye anaghị eri anụ - maka ụfọdụ bụ 'mgbanwe na mberede.' Otu oge ha na-eji obi ụtọ na-apụ na hamburger na oge ọzọ ha ahụla ìhè ma ugbu a nri ehihie bụ organic. kale
Ejikọtara Ọnwụ Ọnụ Agwọghị Ọdịda na Ahụ Ike Ụbụrụ (2022)
Ọtụtụ ndị mmadụ ga-eme ihe ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ụkọ anụ ihe karịrị ntị ha. Ejikọtala ya ugbu a na ụfọdụ nsogbu ahụike mara mma nwere otu nnukwu nsonaazụ ya - mbelata ọrụ ụbụrụ
Met Gala 2021 Iji gaa vegan: Nke a bụ ihe kpatara nri a ji dị mma (2022)
Met Gala na-aga vegan n'afọ a. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara nri sitere na osisi
Larq bottle ọ bara uru? Anyị na-aza ajụjụ ise kacha ukwuu gbasara karama na-ehicha onwe ya (2022)
Karama mmiri ndị a na-ejikarị eme ihe na-aghọwanye ewu ewu. Ọ bụ ụzọ dị mma isi mee ka mmiri na-agba anyị mmiri ka ọ dịkwa mma na gburugburu ebe obibi. Inweta ya n'ọkwa bụ LARQ, akara ama ama nke karama mmiri a ga-eji na-ehicha onwe ya
Razor kacha mma maka ụmụ nwoke 2021: Maka afụ ọnụ, igbe, ime ihe na ihe ndị ọzọ (2022)
Onye nke oge a bụ onye na-agba ọsọ, iji nyere gị aka, nke a bụ ndụmọdụ anyị maka agụba kacha mma maka ụmụ nwoke
Ngwaahịa nlekọta akpụkpọ anụ kacha mma 2021: Mepụta ihe na-eme ihe nlekọta anụ ahụ nke gị dabere na DNA gị (2022)
Na-eche echiche ịgbanwe usoro ịma mma gị? Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ nlekọta anụ ahụ dị irè yana otu PROVEN Skincare, eriri nlekọta anụ ahụ dabeere na DNA, nwere ike isi nyere gị aka iru nsonaazụ ịchọrọ
CBD ọ dị mma maka akpụkpọ gị? Antioxidants nwere ike inye aka dozie otutu, eczema na psoriasis (2022)
Cannabidiol (CBD) bụ ihe a na-ahụ na osisi wii wii. Enwere uru ahụike CBD dị iche iche dị ka ọgwụgwọ na ibelata ọnọdụ akpụkpọ anụ dị ka acne, eczema na psoriasis
Were Dr. Berg's Electrolyte ntụ ntụ jikwaa ahụ gị (2022)
Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara otú electrolytes si enyere ahụ aka na ihe mere ị ga-eji nye Dr. Berg's Electrolyte Powder nwaa
Ihe omume Yoga kacha mma maka mbelata ịdị arọ iji gosi ụbọchị Yoga International 2021 (2022)
Yoga na-ejikọkarị ya na ime ka uche dị jụụ, mana enwere ihe karịa nke ahụ. Ọ bụrụ na ejiri ma ịdọ aka ná ntị na nraranye mee ya, yoga nwekwara ike inyere gị aka ịkwụsị ibu ma nọgide na-adị mma. Kedu oge kacha mma ịnwale yoga karịa ụbọchị Yoga International 2021?
Atụmatụ nri Keto kacha mma maka ndị mbido: Gịnị, Ebee, Otu esi ebido iwelata ibu ngwa ngwa (2022)
Ọ na-achọ ịma banyere nri ketogenic? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma na ihe ị ga-eri yana nke mgbakwunye nwere ike inye aka
Ịcha ezé n'ụlọ: Charcoal na-eme ka ezé na-acha ọcha & ngwaahịa ị nwere ike ịzụta n'ịntanetị (2022)
Ị maara ezé gị? Nweta ọnụ ọchị zuru oke foto site na ngwaahịa ndị a na-eme ka unyi na-achacha ezé
Uru ahụike kọfị 13 ga-eju gị anya: Gịnị kpatara Caffeine ji dị mma maka gị (2022)
Ị hụrụ kọfị n'anya? Nke a bụ uru ahụike 13 ga-eme ka ị nwetakwuo ihe ọṅụṅụ ọkacha mmasị gị
Ka nri dabere na ihe ọkụkụ nwere ike isi nyere aka gbochie COVID-19 na-esote (2022)
Ọtụtụ ndị Canada amaralarị uru nke nri sitere n'osisi. Ịrụ ọrụ ka mma n'ịkwado ndị na-agbalịrị ime mgbanwe mgbanwe nri nwere ike ịbụ ụzọ dị irè maka iwu gọọmentị
Uru ahụike anọ nke ịmakụ na ihe mere ha ji enwe mmetụta dị mma (2022)
Ihe mere mmakọ na-adị mma bụ ihe gbasara mmetụta anyị
Ihe kpatara 6 mere nduku ji dị mma maka gị (2022)
Nduku dị umeala enyela rap ọjọọ. Ihe bụbu nri dị ọnụ ala nke ọtụtụ nri mba ka ejirila akara n'afọ ndị na-adịbeghị anya nri "adịghị mma" nke kacha zere
Nke a bụ ihe kpatara South Africa ga-eji gbochie ịre ahịa mmanya shuga n'ụlọ akwụkwọ (2022)
Oke ibu nwata bụ nnukwu nsogbu na-eto eto na South Africa. Ihe karịrị 13% ụmụaka nwere oke ibu ma ọ bụ buru oke ibu
Ịkwesịrị ị drinkụ mmiri iko 8 kwa ụbọchị? Otu ọkà mmụta sayensị na-emega ahụ na-akọwa ihe kpatara akụrụ gị ji sị 'Mba (2022)
Ọ bụghị ịgbawa karama mmiri onye ọ bụla, mana ndị ahụike nwere ike ịnwụ n'ezie site na ị drinkingụ oke mmiri
Ego ole ka ị chọrọ n'ezie? (2022)
Ụra na-enyere gị aka ịmụta, itolite na ime nke ọma, na usoro ndị a niile na-ewe oge
Ụlọ ọrụ mgbatị ahụ, agbanweelarị, nwere ike Morph ọbụna karịa (2022)
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọrịa na-efe efe agbanweela otú ndị America si adị mma. Ndị agha ụlọ ọrụ abụọ na-akọwa etu ụlọ ọrụ na teknụzụ ọgbara ọhụrụ si weta ahụmịhe mgbatị ahụ / onye na-enye ọzụzụ n'ime ụlọ obibi America
Ihe kpatara na anyị anaghị ehi ụra na America (2022)
Daalụ Amerisleep, anyị maara ihe kpatara agwa Tom Hanks ji bụrụ "ụra ụra na Seattle" - o nwere ọrịa isi mgbawa
Mriri ahụ Smartphone nwere ike imebi ụra (2022)
Nnyocha ọhụrụ e bipụtara na Frontiers of Psychiatry na-eme ka ọmụmụ ihe ochie na-ekwu na ịṅụ ọgwụ ọjọọ nwere ike imebi ụra gị
Ka ịhọrọ njikwa ọmụmụ ziri ezi, mara onwe gị (2022)
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nchịkwa ọmụmụ gị dị irè, hụ na nhọrọ gị bụ ihe ezi uche dị na ya ma kwe omume
Ndị ụgha n'okporo ụzọ mgbakwunye: mgbatị ahụ, akara mbelata ibu anaghị agwa ha niile (2022)
Ihe dị ka 15% nke ndị America anwalela mgbakwunye ọnwụ arọ. Ejideghị mgbakwunye na otu ụkpụrụ dị ka ọgwụ n'ihe gbasara nlekọta nchịkwa, nke pụtara na ọ bụghị mgbe niile ka ndị na-azụ ahịa na-enweta ihe e kwere ná nkwa na label
Ahịhịa eze gị nso nso ụlọ mposi? Ka anyị chegharịa ịdị nso, biko (2022)
Ọ gwụla ma ị kpachapụ anya maka ihicha na ịchekwa ahịhịa gị, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ị gbasaala karịa ihe ntacha eze na eze gị
Ịdị ọcha nke nwanyị: mee ka usoro gị dị mfe (2022)
Ọkara nke ndị America niile, 50.8%, nwere vulvas. Dị ka ọtụtụ akụkụ nke ahụ mmadụ, ha chọrọ nlebara anya ụfọdụ, mana kpọmkwem ụdị, na ole, nwere ike ịbụ ajụjụ na-ese okwu
Na Sọnde, Cheta Roses, na Nchekwa STD (2022)
Na 1978, ụmụ akwụkwọ na-aga ụlọ akwụkwọ Berkeley nke Mahadum California kpebiri ụbọchị Valentine ga-aga, na ụbọchị Condom, nke ọma karị, izu condom, ga-ewere ọnọdụ ya. N'afọ ndị sochirinụ, ọnwa Febụwarị ghọrọ ọnwa Condom nke mba. Isi ihe: ịkwalite mmekọ nwoke na nwanyị dị mma site na
Mkparịta ụka na-ekpo ọkụ nwere ike ịgbanye oyi ma ọ bụrụ na ihe nfụkasị onye mmekọ tolitere (2022)
Ị na-enwe ihe nfụkasị ahụ na onye gị na ya?
Osisi a na-ahụkarị na-ebute ọrịa kansa na-adịghị ahụkebe (2022)
Q BioMed anatala aha Orphan Drug Designation site na FDA iji mepụta ọgwụ cancer imeju pụrụ iche dabere na mpempe akwụkwọ sitere na S. nigrum Linn
Ozi Ọma Ugbu a, na Ma eleghị anya mgbe e mesịrị, maka ndị ọrịa HIV (2022)
Ọgwụgwọ ọhụrụ abụọ nke nje HIV nwere nkwa dị ukwuu: otu nọchiri anya ugwu ọgwụ kwa ụbọchị, nke ọzọ nke nwere ike mechaa bute mgbochi ọrịa
A na-echeta ihe nri Tartar maka imebi (2022)
Azụ na-esi ísì ụtọ abụghị naanị ihe ị ga-echegbu onwe gị maka ire ere ugbu a, dịka FDA kwuputara ihe nrite tartar afọ ofufo na-echeta site na House-Autry Mills, Inc
Ịchụ nta maka njikọ n'etiti egwuregwu vidiyo na oke oke ụmụaka (2022)
Ụmụaka na-agba ọsọ na-ere ọkụ ma na-adịkwa nro, ebe ndị na-ahọrọ ịnọdụ ala mgbe ha na-egwu egwuregwu vidio ma ọ bụ na-ekiri telivishọn na-eche ihu na nke ọzọ. Ọ̀ bụ iji egwuregwu vidio na-eto eto so sonye?
Ọbara nwere ike ijide igodo iji chọpụta ọkwa mmalite AD (2022)
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya na-egosi na nyocha ụlọ nyocha ọhụrụ nwere ike inye aka chọpụta ọrịa Alzheimer ngwa ngwa na ngwa ngwa
Ọmụmụ jikọtara ndị America Hispanic, Nhọrọ nri na ihe egwu Asthma (2022)
Maka ọtụtụ nde ndị America nwere ụkwara ume ọkụ, nsogbu iku ume bụ ihe egwu dị adị kwa ụbọchị. Ndị Hispanic-America na-enwekarị ụkwara ume ọkụ karịa otu ndị America ndị ọzọ, ndị nchọpụta na-arụkwa ọrụ iji chọpụta ihe kpatara ya
Na-awụli ụdọ Iji nbudata ngwa efu (2022)
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ na-atọ ụtọ iji tinye mmega ahụ n'ime afọ ọhụrụ gị, elela anya karịa Nintendo Switch gị. Otu obere ndị mmepe na Nintendo kere Jump Rope Challenge dị ka ọrụ anụ ụlọ iji gbakwunye mgbatị ahụ na usoro ha, ma ugbu a ọ bụ nbudata n'efu na Nintendo Switch
Ntuziaka nri ọhụrụ na-atụgharị uche, nkatọ Garner (2022)
Kedu ihe na kedu ka ị ga-esi na-eri nri? Enwere ntuziaka ọhụrụ
Ịga n'ezie onye anaghị eri anụ nwere ike ime ka ahụike gị dịkwuo mma (2022)
Ọmụmụ ihe ọhụrụ ejikọtala uru ahụike dị ukwuu na ezigbo nri vegan
Enyi kacha mma nke mmadụ, ọgwụgwọ maka owu ọmụma (2022)
Ndị enyi anụmanụ nwere ike ịbụ isi ihe na-eme ka ahụike uche dị mma n'oge Covid
Mmetụta ogologo, na-adịgide adịgide nke ime na ọmụmụ (2022)
Ime na ịmụ nwa na-ahapụ karịa mgbatị; ọ na-aka nwanyị
Na-ebuli ákwà mgbochi na ndekọ ndị ọrịa (2022)
Iwu 21st Century Cures Act mere ka ọ dịrị ndị ọrịa mfe ịnweta na ịnyefe ndekọ ha
Nke a bụ ihe na-eme ụbụrụ na obi gị n'oge njide obi
Teknụzụ Wearable ga-enyere gị aka ịkwụsị ibu?
Vidio Sayensị: M ga-anwụ site n'ịkpọgide elu? Lelee ma chọpụta
Popular ka awa 24
Desserts Ụbọchị Ncheta: Ọgwụ 5 dị mma n'ime nkeji iri ma ọ bụ obere
Egwu Gene' Egosiri na-ebute PTSD; Usoro mgbochi nwere ike ịdị na Horizon
Ihe Ụbọchị Ncheta Pụtara: Ịkọwa Ụmụaka Ọnwụ
$55,000 Arụrụ agwọ enwebeghị mkpuchi mkpuchi nwa nwanyị Maryland Jules Weiss na-achọ nhọrọ; Mgbochi venom na-efu karịa ịwa ahụ obi mepere emepe
A na-atụgharị ahaziri maka ọrịa obi n'ụzọ? [VIDIO]
Palette mmetụta mmetụta uche zuru ụwa ọnụ? Ọnọdụ jikọtara egwu na agba, ọbụlagodi na enweghị synesthesia
Sayensị nke Sunshine
Nne-nke atọ chọpụtara na di ya nwụrụ anwụ bụ nna ya n'ezie
Mkparịta ụka dị ụtọ na-ewe na: Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na mmiri ọka fructose dị elu agaghị ata ụta maka ọrịa oke ibu
Okpomọkụ na ebili mmiri na mkpofu oyi nwere ike ịkpalite ọgụ obi na-egbu egbu
Ndị Africa-America na-enwechaghị ike ịgbaso nri ọhụrụ iji mee ka ọbara mgbali dị ala
Ezé ọjọọ nwere ike imetụta akara ule ụlọ akwụkwọ nwata?
Na-eche ụgbụ mgbochi ịba ihu, anwụnta na-agbanwe àgwà
Ikpeazụ Sextuplets na-enweta ọbịbịa pụrụiche ebe ụlọ ọgwụ na-ebuga Quintuplets nke ọma
Igbe eziokwu: Ọnọdụ dị n'azụ ọrịa oke ibu nke America
Ihe omumu choputara ihe kpatara antidepressants ji aru oru mma maka ufodu
Popular na edemede
ỌnọdụCovid-19Ibi ndụ ahụikeIhe ọhụrụBlọọgụ ahụikeỌgwụAhụike ucheEchicheOsisi vaịnUgwu ahụDị mkpaỤwa